Ruman Amant NEupane, post list, WRITING NEPAL — Books, Writings, Authors, Publisher, Writers and Blogger - All in One Place. — Just Write !
Home > Ruman Amant NEupane > Post list
Ruman Amant NEupane's post list
रुमन न्यौपाने 25th Sep 2015 Other(अन्य विधा)
'त्यो पल महासागरले ...
Rated 2.56/5 (From 252 user)
0 comments Like ( 0) 2056 reads
रुमन न्यौपाने 2nd May 2015 लघु-कथा
Rated 2.51/5 (From 261 user)
1 comments Like ( 1) 2011 reads
उसको गल्लि बाट देखिने एक कोसको बाटो
रुमन न्यौपाने 26th Dec 2014 Prose(गद्य कविता)
म अघिल्तिर एउटा टाङ्ग फाट्टिएको छ ।
यो नशा के हो ।
निेमेश चुपचाप ।
बिबेकशुन्य छु ।
यो रक्सिको नशा हो
यो कबिताको नशा हो
आत्म गौरबको नशा हो ।
गौरचमा ठुटिएका पोथ्राहरुले सोध्छन् ।
अघाएर झरेका गोबरका थुप्राहरुलाई
Rated 2.28/5 (From 250 user)
0 comments Like ( 1) 1094 reads
रुमन न्यौपाने 8th Dec 2014 लघु-कथा
Rated 2.62/5 (From 235 user)
0 comments Like ( 3) 1180 reads
रुमन न्यौपाने 25th Nov 2014 Prose(गद्य कविता)
पग्लेर अोठ हुँदै चिउँडो पुग्छ ।
कबिताको एउटा चोईटा
अंगेनाको डिल मुन्तिर खस्छ ।
र खरनि हुन्छ ।
म चिम्टा तताउँछु ।
त्यो जरो ले थलिएको
सानेको निधार जस्तो रनक्क रन्किन्छ ।
गँगटोले मुख बाए जस्तो
चिम्टाले मुख बाउछ ।
म डडेर ...
Rated 2.56/5 (From 270 user)
1 comments Like ( 18) 1273 reads
रुमन न्यौपाने 3rd Nov 2014 लघु-कथा
तिमि बग्यौ कुन सागरमा मिल्न ..... थामेर किन छोड्यौ हातहरु .....
राष्ट्रिय समाचार पछि यो गित बजिरहेको थियो रेडियो नेपाल मा । गर्मि महिनाको अाखिर तिर, गर्मि निकै थियो । 'एक झर पानि परिदए शितल हुने थियो ।' उ यस्तै सोच्दै थियो । पसिनाले जिउ ...
Rated 2.63/5 (From 204 user)
0 comments Like ( 15) 923 reads
रुमन न्यौपाने 18th Oct 2014 लघु-कथा
THERE were four of us - George, and William Samuel Harris, and myself,
and Montmorency. We were sitting in my room, smoking, and talking about
how bad we were - bad fromamedical point of view I mean, of course.उसको कोठाको झ्याल उत्तर तिर फर्किएको थियो । त्यसैले पनि त्यहाँ घाम छिर्दैन । उसको बाबु कुखुरालाई दाना हाल्दै थियो । मकै र सुकेका पाउरोटिका ...
Rated 2.62/5 (From 192 user)
0 comments Like ( 0) 860 reads
रुमन न्यौपाने 17th Sep 2014 लघु-कथा
'प्रभा' उ निदाएकि थिईन । त्यसैले उसलाई बोलाई हेरें ।
हामि दम्पति निदाउँदैनौ । रात अनिदो कट्छ । अन्धकार पनि कति क्रुद्द देखिन्छ । सुनसान र असुराहरुले ब्याप्त भए जस्तो ।
प्रभा म तिर फर्किई । भनि । 'भोलि बिहान मन्दिर जानु छ । सुत ...
Rated 2.49/5 (From 167 user)
0 comments Like ( 0) 840 reads
बिरेठाँटिको ईस्टकोट र दमिनि फेवा:
रुमन न्यौपाने 6th Jun 2014 Prose(गद्य कविता)
अोछ्यान माथि बसेको छ,
ईस्टकोटको उध्रेको फेर सिउँदै ।
भुत्ते खरानिको तातो माथि
भोकले च्याँठिन्छन् ।
कुँडेको मनतातो दुध
चोर्दै गरेको बिरालो,
बिरेठाँटिको अगाडि बाटै भाग्छ ...
Rated 2.49/5 (From 169 user)
0 comments Like ( 0) 708 reads
ढाई सय लाल सलाम
रुमन न्यौपाने 31st May 2014 Comedy(हाँस्यब्यङ्ग)
नयाँ नियुक्त राजदुतले राखेको भब्य रात्रि-भोजबाट सबै ठुला नेताहरु बाहिरिए । काठमान्डुमा हालसालै पानि परेप हत्तु थियो । दुई तिन देखि परेको मुसलधारे बर्षा रोकिने छाँटै थिएन । सडकमा पानि टिलपिलटिलपिल थियो । सबै ठुला नेताहरु ...
Rated 2.63/5 (From 279 user)
2 comments Like ( 2) 1347 reads
रुमन न्यौपाने 13th May 2014 Prose(गद्य कविता)
तार्किक सपनाका आँधि बेहेरिहरु
बर्गाकार कोठाको चौघेरा बाट सुरु हुन्छ ।
जहाँको झ्याल बाट
चौथाई आकासको दृश्य मात्र देखिन्छ ।
उ पटक पटक,बहुलाउँदै ब्युँझन्छ ।
रङगिन सपनाका ताँतिहरु
बुढा कमिला झैं पखेँटा हाल्छन् ।
Rated 2.57/5 (From 153 user)
1 comments Like ( 2) 723 reads
आल्मुनियमको अण्डाकार फ्रेम-
रुमन न्यौपाने 7th May 2014 Prose(गद्य कविता)
अण्डाकार फ्रेम भित्र
समयको सापेक्षेता झुण्डिएको थियो ।
सोच र दुबिधाको घेरा भित्र
हचुवामा कुदिरहेको थिंए ।
म समयलाई खोज्छु ।
समय मलाई खोज्छ ।
समय परिबर्तनलाई खोज्छ ।
समय यथार्थलाई खोज्छ ।
म भोलिलाई ...
Rated 2.62/5 (From 164 user)
5 comments Like ( 2) 787 reads
उकारलाई चिठ्ठि आएको छ ।
रुमन न्यौपाने 30th Apr 2014 Prose(गद्य कविता)
म भुगोलको परिधिमा बसेर
आफ्नोहरुको स्नेह खोजिरहेको थिंए ।
उड्दै आएको चराले सोध्यो ।
बग्दै गरेको खोलाले सोध्यो ।
अचल महाशागरले सोध्यो ।
तिम्रो चिठ्ठिको बेहोरा मा कस-कसको प्रेम छ?
म अवाक् ...
Rated 2.44/5 (From 134 user)
1 comments Like ( 2) 540 reads
यो तिमिले के गर्‍यौ ?
रुमन न्यौपाने 4th Mar 2014 Tragedy(बियोगात्मक)
तिमिले बिलाप गरिरह्यौ
निस्तेज ऊभिएर सुनिरहें
अहोरात्र तिम्रो प्रसंसामा
परिश्रम ब्यर्थ गरिरहें
अधिकतम चाहाना बोकेर
तिमिले बाटो काटिदियौ ।
दृढटा पुर्बक अडिएर
आधार तिम्रो खोजिरहें
ईश्चर सामु घुँडा ...
Rated 2.52/5 (From 163 user)
0 comments Like ( 2) 721 reads
धन्यबाद ! ग्लाभ्स्को ...
रुमन न्यौपाने 15th Jan 2014 Story(कथा)
The Jarvy Café को बार्दली बाट देखीएको एउटा अराजक सहर ।म लामो कोरीडर हुदै उसको ढोका सम्म पुगेको थिए । डोर बेल थिचेपछी उ स्वागतार्थ ढोका छेउमा उभीन आईपुगेको थियो । छोटो छोटो दारी, कसीलो छाती, हल्का खैरो आँखा । एउटा रवाफीलो व्यक्तित्व ...
Rated 2.56/5 (From 193 user)
0 comments Like ( 1) 1004 reads
प्रेमको मन्ञुषामा के थिएन ?
रुमन न्यौपाने 8th Jan 2014 Prose(गद्य कविता)
प्रेमको अनुलेखन गर्नु पर्दा
केहि शब्दहरु उधार लिन्छु ।
फिट हुने केहि शब्दहरु ।
उसको प्रेमानाद ।
मलाई सुन्न जाँगर चल्छ ।
म घन्टौं सम्म सुन्न सक्छु
म बर्षौं सम्म ...
Rated 2.36/5 (From 165 user)
0 comments Like ( 2) 723 reads
रुमन न्यौपाने 27th Dec 2013 Story(कथा)
Rated 2.64/5 (From 289 user)
3 comments Like ( 4) 4492 reads
रुमन न्यौपाने 15th Dec 2013 Story(कथा)
समय । त्यस समय भित्रको एउटा लामो समय । त्यस लामो समय बिचको धेरै पलहरु भित्रबाट छुट्टिएको एउटा छोटो समय । अनगीन्ती भ्रमहरु । अनगीन्ती सपनाहरु । अनि असिमीत जन्महरु जसलाई समयको त्यहि छोटो बाटोमा रेखाङ्गन गरिएको थियो । अर्ध जिबित ...
Rated 2.46/5 (From 192 user)
0 comments Like ( 1) 917 reads
रुमन न्यौपाने 4th Oct 2013 Other(अन्य विधा)
जब ऊनि मेरो ढोकामा प्रेम-पत्र लिएर उभिरहेकि थिईन त्यतिखेर ऊनले मेरो आँखा पढिछिन् र भनिन 'हेर त तिम्रो आँखा मा । तिमि के पढ्दै छौ ?'
त्यस पछि मैले ऊनको प्रेम पत्र पढ्न थालें ...
मेरो प्रिय सम्बोधन।
तिमि, तिमि हुनुमा थाक्दैनौ । म, म ...
Rated 2.48/5 (From 174 user)
0 comments Like ( 2) 716 reads
रुमन न्यौपाने 3rd Sep 2013 Story(कथा)
बरुनि खाना ऊत्पातै मिठो बनाउँछे । झन उसले तारेको अन्डा र उसिनेको आलु त प्यारेस हमाल लाई सुटिङमा चाहिन्छ चाहिन्छ । तार्यन सिग्देल पनि बरुनि भन्दा बरुनिले तारेको प्याज आलुमै तानिन्छ रे । हुनपनि बरुनि तार्ने तुर्नेमा खप्पिस ...
Rated 2.56/5 (From 172 user)
0 comments Like ( 1) 990 reads
ढाई सय लाल-सलाम
रुमन न्यौपाने 20th Jul 2013 लघु-कथा
Rated 2.66/5 (From 155 user)
0 comments Like ( 1) 994 reads
भोगबिलास र पदावलिहरु
रुमन न्यौपाने 17th Jul 2013 Story(कथा)
यो कहिलेको कथा हो ? - कथाकारलाई सोधियो ।
निकै अघिको ।
निकै अघिको ? -अब प्रश्नकर्ताले फेरि सोध्यो ।
अँ । निकै , निकै समय अघिको । -कथाकारले फेरि भन्यो । त्यसपछि ऊसले प्रकिति पत्रमा कलम कोर्यो ।
साताको अन्तमा अदालतमा फेरि बहस भयो । ...
Rated 2.52/5 (From 54 user)
0 comments Like ( 0) 317 reads
जनाबरहरुको हकहितको लागि ।
रुमन न्यौपाने 15th Jul 2013 Prose(गद्य कविता)
यो शहर मेरो होईन ।
झम्टेर छोप्नेहरुको हो ।
यो सडक मेरो होईन ।
कुद्नेहरुको हो ।
मत शहरमा मान्छेहरु
देख्न छाडिसकें ।
आबेग र रफ्तारनै छ ।
यो शहर मेरै हो ।
तर म यो शहरको होईन ।
त्यो रफ्तार मेरै थियो ।
Rated 2.62/5 (From 138 user)
0 comments Like ( 0) 596 reads
'प्रेमको अभिव्यक्ति '
रुमन न्यौपाने 6th Jul 2013 Other Poem(अन्य कविता)
झिँगटि घरको दलान छेउ
उम्रेको एक थान प्रेम माथि
मैले कबिता लेख्नै पर्छ ।
कुम्खा भित्र लुकेको माया
हार्दिकता ताप्न निस्कदाँ
हो, त्यति खेरै हो
मैले उनलाई प्रेम गरेको ।
प्रेमको अनुलेख गर्नु पर्दा
म केहि शब्दहरु उधार लिन्छु ।
Rated 2.49/5 (From 122 user)
0 comments Like ( 1) 618 reads
Rated 2.6/5 (From 302 user)
0 comments Like ( 2) 1094 reads
रुमन न्यौपाने 17th May 2013 Prose(गद्य कविता)
Rated 2.65/5 (From 289 user)
5 comments Like ( 25) 5316 reads
मेरो बाँस घारी र बदलिएको प्रेम ।
रुमन न्यौपाने 9th May 2013 Prose(गद्य कविता)
ज्यादाजसो, बाँसघारी बाट निस्कीएको सुसेली समाउँदा ।
बास बस्ने चराहरुको प्रेमिल भाषा खोज्छु ।
म बुझ्छु तिनीहरुको प्रतिध्वनी
जहाँ, असाधारण प्रेमको गुञ्जायस हुन्छ ।
त्यहाँ ब्याप्त प्रेमको परिभाषामा
मैले एउटै भाषा पाँउछु ।
Rated 2.77/5 (From 146 user)
1 comments Like ( 22) 755 reads
म बेचिएर के भयो?
रुमन न्यौपाने 8th Apr 2013 Other(अन्य विधा)
मक्कीएको हाड लिई
म बाँचेको धेरै भयो ।
सस्तिएको भाउ माझ
म बेचिएको धेरै भयो ।
मेरो अस्तित्व छारो भएनी
स्वतन्त्र उड्न कहाँ सक्छु र ।
म चिप्लिएर के भयो ।
बेढङ्गको सपना, कोठिको याचना
जिबनको खेस्रा काहाँ केरेँ र ...
Rated 2.54/5 (From 114 user)
2 comments Like ( 3) 652 reads
रुमन न्यौपाने 9th Jan 2013 लघु-कथा
कसरी दुई वटा भेडाहरू हिजो हिँउमा पुरिए । पोहर पनि एउटा चौंरी मरेकै हो । तर तुलनामा यस बर्ष खासै नोक्सान भएको थिएन भन्ने सुनेको थिएँ । त्यति बेला म ९ या १० बर्षको थिएँ क्यार । नाफा नोक्सानको मलाई त्यति हेक्का थिएन । तर बाको धमिलो ...
Rated 2.2/5 (From 111 user)
6 comments Like ( 6) 927 reads